Ilay mpanadio kodiarana tsara indrindra - avereno amin'ny laoniny ny gloss tany am-boalohany.
Home / Products / Kodiaran-tariby tsara indrindra
Fanadiovana tsara indrindra
Vetivety dia esorina ny ratra sy ny fandikana maloto! Lafin-taranao inona no mitana andraikitra lehibe indrindra? Ny kodiaranao! Eo anelanelan'ny hafanana, toetr'andro ratsy ary tsy tapaka ireo loto maloto ny kodiarana dia saika maloto avy hatrany. Ny OPS Rim Cleaner dia namboarina manokana vovoka fanadiovana mifangaro amin'ny tontolo iainana mba hikendrena ny vovoka mavesatra ary avelao tsy hisy pentina ny kodiaranao. Sasao, sasao ary avereno ho any amin'ny gloss tany am-boalohany ny fantsonao kodiarana. Mirehareha amin'ny tenanay amin'ny serivisy sy ny fahafaham-po izahay ary mino fa ny Chrome Rim Cleaner dia vokatra mahasoa amin'ny tsena.
♣ OPS Wheel sy Tyro Mpanadio
♣ 500g vovoka, rakotra kitapo plastika na boaty plastika.
♣ Afaka manadio milina fiara maro.
♣ Mitsodrano ny ao anaty vovoka, mihodina haingana.
Rim cleaner, serivisy OEM / ODM, Wholesale.
Tokony hampiasa ny Car Rim Cleaner matihanina ianao.
Fantatrao ve ireo fanontaniana rehetra ireo? Sarotra ny manadio ny loko marevaka, ny solika solika, ny vovo-vy, ny kodiarana mpamono, feno vovoka, oxidized ary ny tsy fahampian-doko miaraka amin'ny mpanadio tsy madio. Ny kitapo marevaka dia afaka manamboatra fiara tsotra sy fiara vaovao. Ary amin'ny fotoana kely fotsiny ampiasao ny vokatra fanadiovana mety, fomba maoderina, dia afaka mitondra ny kodianao mankany amin'ny ambony kokoa. Ny vovoka bateria, vovobony marefo vokatry ny fahasosorana rehefa mampihatra ny fihenan-tsakafo, dia tena mandevona ary mety hiteraka fahavoazana maharitra raha lava amin'ny lava fiara. Izany no antony tokony hanadiovana ny kodiaranao matetika.
Ny fomba hanadiovana ny vovoka vaky amin'ny kodiarana kodiarana? Farafaharatsiny dia tokony hanana fihenam-bidy haingana dia haingana, ny fahaiza-manaony ary tsy manimba ny kodiarana!
Nahoana no antsoina hoe tsara indrindra izy io? Wheel and Tire Cleaners?
Manana fikarohana fikarohana, teknolojia fampandrosoana, mpahay siansa maromaro izahay mba hamolavolana vokatra vaovao isan-taona. ny kodiarana dia misy ny fikajiana mahery vaika, ny asidra-poana sy ny pH-neutral fa afaka miditra haingam-pandeha sy reraka ao amin'ny loharano ary mahatonga ny fotoana fanadiovana ny kodiaranao ho haingana kokoa! Ny ankamaroan'ny fanadiovana kodiaran-droa dia mety ho simba amin'ny kodiaranao ary hamafa mihoatra noho izay tianao hodiovina! Ny kitapo fanodinana kodiarana OPS dia miasa haingana ary manala ny fikorontanan'ny metaly marefo!
Tsy toy ny vatan'ny fiara iray ny ramevany, ka mibaribary ny fahasalamana sasany any. Isika dia mijery ireo fomba entina hanomezana lanjany sy hahazo ny asa
natao ho an'ny mpanjifanay. Ny kofehy, ny kodiaran-tadio manadio dia iray amin'ireo endrika tsara indrindra fanadiovana kodiarana, ary tianay ny hahita ny zavatra azonao atao. Tsy voatery henjana ny fanadiovana ny kodiarana! Mifangaro fotsiny amin'ny rano izy, ary ampiharo amin'ny kodiaranao maloto.
• Mihabetsaka ny famolahana haingana sy ny fo.
• Ahitana faktiora mahery vaika, izay afaka manala haingana ireo tain-kazavana.
• Ahitana singa manjelatra, miaro tanteraka ny fihodinan'ny kodiarana, azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ity vokatra ity Ataovy toy ny vaovao ny kodiaran'ny fiara.
• Fiarovan-tena madio tsy tapaka, malemy paika, ary aza manimba ny tananao.
♦ Na dia maloto aza ny satan'ny fiara, dia mofomamy ho an'ny mpanadio matevina amin'ny kodiarana matevina OPS!
Ny OPS Homemade Tyre Cleaner dia manasongadina tombony:
Manan-karena amin'ny fanadiovana ny liona ary manana fahaiza-mandroso lalina mba hamongorana ny vovoka marefo.
♦ Madio toy ny vaovao
Ampitomboy ny tsy fahampian-tsakafo, tsy misy endriny ary tranga hafa amin'ny kodiarana kodiarana, hamerina azy amin'ny gloss tany am-boalohany.
Azo atao ny manangana sarona fiarovana madio mba hisorohana ny fahavoazana toy ny tasy, fanesorana, ary fanodinana.
♦ Fanapahana haingana
Manasa sy manala haingana ny vovoka, tsotra sy mora.
♦ Toeram-piarovana sy tontolo iainana
Azo ampiasaina amin'ny sehatr'asa mitovitovy amin'ny kodiarana, azo alaina ary tsy misy akora simika.
Ahoana ny fanesorana ny harafesina amin'ny baomba alumina?
1. Alefaso ny vilona 2-3 mba hampidirana vovoka ao anaty barika, manolo-tena ny handefa ny vovokao aloha ary handefa rano.
2. Apetaho amin'ny rano ny alaola ary avelao ny rano hipetraka eo amin'ny peratra fanorenana mandritra ny minitra vitsy alohan'ny fandroahana
Izy io miaraka amin'ny fitaovana toy ny sponge sns. Io no fanadiovana an-trano madio sy simenitra ranon-tsavony, manana vovo manadio
ho an'ny fiantsonan'ny fiara. Tsara kokoa ny miasa!
3. Esory amin'ny rano madio izy. (Na fantsona mivantana avy amin'ny fiara manerantany)
4. Farany, esory amin'ny lamba izy.
Ahoana ny fanesorana caked amin'ny menaka amin'ny motera?
Izahay koa dia manome Degreaser Engine Cleaner mahasoa, namboarina avy amin'ny mason-tsivana fanazaran-tena.
Asehoy ny fanadiovana maotera matihanina eto ambany eto:
Ahoana ny hevitrao momba ny famatsiana fiara OPS? Raha mila fanazavana fanampiny, azafady Mifandraisa aminay.
Taratasy fanadiovana fiara madinika
OPS ho an'ny mpanadio lamba OPS
Period Guarantee 3-5 Taona
MOQ 1 MT (kitapo 2000)
Daty nanomezana Around 15 andro.
Azafady mba porofoy fa olona ianao amin'ny fisafidianana ny Tree.